yabadlali abaningi Massively Ekwenza Umlingiswa imidlalo - uhlobo eliye laba adume eminyakeni yamuva. Ubuchwepheshe wangenela kude phambili, okuyinto manje ikuvumela ukudala agqamile evuthiwe imihlaba onjiniyela, kanye abadlali - bagxuma kulona usebenzisa broadband uxhumano ukudlala kanye ngamakhulu nangezinkulungwane abasebenzisi bethu, ngaphandle nobunzima.
Omunye wemisebenzi esivelele kunazo kule uhlobo eminyakeni yamuva kuye abe Blade futhi Soul. Le game has ezinye izici ezenza ukuba ivelele neminye imikhiqizo efanayo, ngisho ngokumelene isizinda ezinganekwaneni uhlobo. Omunye izinzuzo main lihlelo imfuno, ngoba luyasetshenziswa kahle. imisebenzi siqu kule mdlalo njalo ngokwanele, futhi konke zihlukaniswe ngamaqembu athile, okulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ngakho, e-game Blade futhi Soul ndima uzokunika yinto emnandi ngempela.
Ngokuyinhloko kuwufanele ukunaka yokuthi Blade futhi Soul ngokusebenzisa indaba siyokulethela bayamangala. Iqiniso liwukuthi iningi bakamalalahlengezela yabadlali abaningi Ekwenza Umlingiswa imidlalo indaba izimfuno uqedile, njengoba besho, ukuze umkhaza, futhi bambalwa abantu unake. Kulelizinga kugcizelelwa yokululama izinhlamvu, lokuqoqa izinto, clan izimpi, kanye ukuhlaselwa nokuseshwa abaphathi main. Kodwa le phrojekthi lihlukile abanye, ngoba kukhona uthuthela at lwendaba umnyuziki okuthakazelisayo, okuyinto akukho okubi kakhulu ukwedlula noma iyiphi enye, amelwe RPG olulodwa. Ngakho, Blade futhi Soul ukudlula umkhankaso - lokhu akulona nje iqoqo izimfuno, okuyinto cishe axhumene, kanye lwendaba egcwele, okuyinto nakanjani ukuyenga.
Ungakhohlwa ukuthi Blade futhi Soul ngokusebenzisa indaba namanje ingane - uhlobo yomdlalo ubhekisela kuso. Massive imidlalo yabadlali abaningi maningi eyenzelwe nokuxhumana abadlali, ngakho ungakwazi kudlule umkhankaso lwendaba uma uthanda ukuyithatha, yithathe kabi, kodwa injabulo main uthola abangelwa yisisindo yephrojekthi. Kodwa lokhu akusho ukuthi akukho awukwazi ukwenza ngaphandle kwabanye abadlali - kunalokho, kukhona zonke izimo ukuqinisekisa ukuthi ungabekwa akhishwa ngaphandle kosizo, uma ungafuni ukuxhumana nabanye abadlali. In the game kukhona inani elikhulu imisebenzi ukuthi ungakwazi kudlule kalula bebodwa - baze ezaphawula ebalazweni ngombala ohlukile. Njengoba wazi, Blade futhi Soul ukudlula izimfuno kuba impela iphuzu elibalulekile, kodwa kwezinye imidlalo kuba. Yini enye ukuziqhayisa le phrojekthi?
Esinye sezici eziyinhloko esiwuphawu saloluhlelo khona hhayi kuphela izimfuno ukuthi ungaya ngaphandle kosizo kwabanye, kodwa lezi zabelo, okuyinto ngaphandle ukwesekwa ngaphandle ungeke ukwenze. Iphuzu lapha akukhona ukuthi awukwazi lapho zibhekene nomsebenzi - bamane usethe ngendlela yokuthi kuphela iqembu nezinhlamvu kungathatha ukudlula. Ngokwemvelo, imisebenzi enjalo futhi kumakwe kumephu ngombala ohlukile. Ngokuvamile, isinqumo ukugubha izimfuno ngemibala ehlukene kuyinto enengqondo kakhulu futhi esilungele abadlali. Uma unesithakazelo Blade Ukudlula umdlalo futhi Soul, okungukuthi emgqeni indaba, landela nombala ofanayo; Ngifuna ukuba ngumnikazi poreshat imisebenzi - inikeza lowehlukile, kukhona isifiso ukuzijabulisa nabangane - ngifuna umbala lwesithathu.
Kufanele obmetit ukuthi lo mdlalo usebenzise ubuchwepheshe ukwehlukaniswa izigaba, okuyinto isengozini ukusetshenziswa, hhayi bonke onjiniyela. Nokho, akubona bonke abadlali ukuthi kuyini, ngakho kufanele sikhulume ngakho ngokuningiliziwe. Ngokwesibonelo, ukuthatha Blade imfuno futhi Soul "Labyrinth", ukudlula lapho ingenye izikhathi ukhiye in the game. Lapho uqeda bese ubuyela emzini, lapho ngathola khona umsebenzi, uqaphela ukuthi edolobheni libhujiswa. Ukwehlukaniswa izigaba ivumela multi-umsebenzisi amaphrojekthi umdlali ukuthonya kwezwe elisizungezile ngokushintsha ngokusebenzisa izinqumo zabo, kanye ukusebenza imisebenzi ethile. Ngakho, lo mdlalo uhlukile ngendlela yalo, ngoba ngakho abaningi bakamalalahlengezela yabadlali abaningi Ekwenza Umlingiswa imidlalo usebenzisa ubuchwepheshe ngenxa yokwesaba imiphumela. Phela, udinga ukuba kuvelwe uhlelo oluphelele oluyokwenza abadlali ukuvumelanisa nezwe, ukubeka nezigaba ezithile izinhlamvu izigaba ezahlukene umdlalo nokunye. I Blade futhi Soul, lobu buchwepheshe isetshenziswa cishe ephelele.
uhlelo Okumbi imfuno
Abaningi bakholelwa uhlelo imfuno ephelele, kodwa kuyafaneleka ukuthi okunjalo akuyona. Ngo njalo emehlweni abo bonke bungadida izimfuno eziningi, okuyinto ngokuyisisekelo uyefana. Udinga ukubulala inombolo ethile izilo ezifanayo ukuqoqa izinsiza ezidingekayo ukuze sithole into esibekiwe, nokunye. Kodwa lapha kungenzeka ukuthi bayowenza iqiniso lokuthi yabadlali abaningi Ekwenza Umlingiswa game ingxenye enkulu babe imisebenzi efanayo, okuyinto hhayi systematized kahle kakhulu.